Archive du 20180103
Mpanara-dia an’i Dadavalo Efa mivonona amin’ny zava-drehetra
Natomboka tamin’ny fanamarinana ny anarana ao anaty lisi-pifidiananana nanomboka ny volana desambra teo ny fiomanan’ireo zanak’i Dada na ny mpomba an’i Marc Ravalomanana amin’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Izay no anton’ny fihaonana sy fizaram-baovao izay efa nosantarina teny amin’ny Magro Behoririka ary aparitaka manerana ny nosy.
Andry Rajoelina Amin’ny 2023 vao mety hahita mangirana
Loharanom-baovao avy amin’olona tsara sitra-po niatrika fivorian’ny fikambanana sy vovonana miankina amin’ny fiangonan-dehibe iray eto Madagasikara, tany amin’iny faritra Fianarantsoa iny no nahalalana, fa raha nafenimpenina hatramin’izay dia vaky ihany ny resaka hoe hanohana an’i Andry Rajoelina izy ireo amin’ny fifidianana hatao amin’ity taona 2018 ity.
Raharaha 7 febroary Atao fitaovana hanilihana kandida
Voizina mafy amin’izao fotoana izao ny raharaha 7 febroary 2009 nisian’ny fitifirana teny amin’ny Lapam-panjakana Ambohitsorohitra nandritra ny fananihan-dapa notarihan’ny mpanongam-panjakana tamin’izany vahoaka teny an-toerana. Mbola baraingo hatramin’izao kosa ny tena marina ao ambadik’iny raharaha iny hoe: iza marina no fositra? Ny zavatra mahatalanjona voalohany indrindra dia ny hoe nahoana no tsy nisy na iray tamin’ireo nitarika ny fihetsiketsehana aza maty na naratra, kanefa izy ireo no lohalaharana?
Hery Rajaonarimampianina Hifatraran’ny rihitra rehetra
Manodidina ny 2600Ar ny sandan’ny 1 Euro ny taona 2014 nandraisan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny fitantanana ny firenena, ary tafakatra 4000 Ar izany aty amin’ny 4 taona aty aoriana. Mpahay toekarena sy manam-pahaizana ambony momba izany ny filoha ankehitriny, saingy toa maneso azy izany ankehitriny. Ny filoha ve izany no tsy mahay sa inona no antony tena mampitotongana ny toekarena?
Rivodoza AVA Hiditra an-tanety rahampitso…
Namoaka naoty maneho ny tatitra mikasika ny toetr’andro ny Minisiteran’ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro omaly maraina. Nivoitra tamin’izany, fa misy rivodoza miforona ao amin'ny ranomasimbe Indianina, ka maly tamin'ny 09 ora teo dia tany amin'ny 550Km Atsinanan'i Sainte Marie no nisy azy. Araky ny vinavina dia hitombo hery izy ary ahiana hiditra an-tanety rahampitso alakamisy 04 na ny zoma 05 janoary 2018.
Fety tany Toamasina Mpanendaka iray maty voatifitry ny polisy
Nihena be tsy tahaky ny isan-taona ny tranga noraisin’ny mpitsabo eo anivon’ny Vonjy Taitra ny Hopitaly be Toamasina tamin’ity taona ity. Raha ny tranga noraisin’izy ireo notsaboina dia niisa 85 izany ny alahady sy ny alatsinainy teo
Somary mangingina aloha hatramin’izao ny resaka politika noho isika vao avy niatrika ny fetin’ny faran’ny taona sy ny fitsenana ny taom-baovao. Mbola somary mipiripirina ny rehetra, saingy isan’ny zavatra lehibe hitodihan’ny sain’ny maro izao dia ilay fifampiharahabana noho ny asaramanitra eny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha ny 05 janoary ho avy izao.
Fitotongan’ny Ariary Tsy vahaolana ny fanafoanana ny MID, hoy i Patrick Randriamisata
Mitotongana tanteraka ny sandan’ny vola ariary eo anatrehan’ny vola vahiny satria efa manodidina ny 4000Ar mihoatra na latsaka kely izany amin’izao fotoana izao, ka ny tsenan’ny takalo ara-bola na ny MID (Marché Inter-bancaire des devises) no tena antony.
Miakatra indray ny vidim-bary 700 Ar ny iray kapoaka amin’ny makalioka
Na dia efa nisy aza ny ezaka nataon’ny Ministeran’ny Varotra tamin’ny fanafarana vary avy any ivelany mba hahafahana mampihena ny vidim-bary eto an-toerana, indrindra fa ny eto an-drenivohitra dia mbola tsy mitsaha-miakatra hatrany ny vidim-bary, indrindra fa ny vary zana-tany.